Indlela ukuqabula intombazane okokuqala?
Kiss lokuqala - kungcono njalo ethokozisayo. Ngemva kwakhe, wazi okuningi ngami ngokwami, umlingani ngisho kanjani ubuhlobo bakho ozokhula, kungakhathaliseki ukuthi ufika ubulili noma umshado. Ngandlela-thile, waves ngoba amadoda aqale ukuqabulana. Lokhu kuyaqondakala, ngoba ngesinye isikhathi kunzima ukuqonda, kwafika kakhulu "isikhathi esifanele."
Uma ningabakaKristu ubunjalo romantic futhi bafuna ukubona ngokwabo kusukela ngaphandle bese amanye amathiphu ezisebenzayo ngokuphathelene nini futhi kanjani ukuqabula intombazane, sikucebisa ukubona movie "Uthando Lwangempela" (I Want Ukuthi Ushada Ryan Banks - comedy konyaka 2004).
Yiqiniso, akufanele kakhulu wesabe kiss lokuqala, kanye nezinye amaphuzu ezithakazelisayo ubuhlobo nowesifazane, ngoba uma uchitha isikhathi nawe, khona-ke yena, cishe, sekuyisikhathi eside babefuna ukuthuthela kwelinye izinga. Kungase ukwenza ngisho uqobo ngithuthuke futhi ukukuqabula kuqala.
Uma-ke kutsi loku, kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba ngithathe isinyathelo kuqala, ezandleni zabo. Indlela ukuqabula intombazane ukuze emadolweni akhe inhliziyo ngashona wayeka, wafuna ukuphinda ngokuphindaphindiwe? Futhi lapho kungcono ukuyenza? Uzofunda zonke mayelana komzimba zesifazane kwemtimba, lapho kufaneleka ukuqabula intombazane ngokubona abesifazane, kanjani ukuyeka sezinzwa futhi ufunde ukuthi ungadala izikhathi yimpumelelo kakhulu romantic.
Ngiyesaba ukuqabula intombazane
Calm, sithi kuwe, nje sokwehlisa! Isinyathelo sokuqala sokuyeka sezinzwa, funda ukuzibamba emhlabeni wakhe. Musa iwela stupor ngesikhathi esihle ngokwanga, kodwa alilokothi iza. Noma kunjalo, ubani owaziyo nini ngalowo mzuzu azofika ukuthi silinde? Ngezinye izikhathi kungenzeka ukuqabula intombazane ngemaminithi ekucala iyazazi, futhi lena ukhetho best ukuqala ubuhlobo vertiginous. Ngakho ungesabi, nje musa udla amasemishi anyanisi ngaphambi kokubekwa kosuku, khona-ke nakanjani kube nzima lokudlela up.
Akubalulekile ukuba aphathe first kiss njengoba Ukukhetha zezinkanyezi. Misa ukukhathazeka mayelana kiss kancane futhi khumbula waphinda ukuthi ngeke ukuchitha isikhathi sami ku othile engawuboni dream of a kiss, futhi izikhathi mhlawumbe eziningi azenzile emcabangweni wakhe. Ngisho noma izinto zingenzeki ngendlela wena wacabanga intombazane, awuthandayo, esisukela ngeke uthole, kodwa uma ungakwazi ukubaleka ngemuva ngokwanga Kwaqale kwaba intombazane. Khumbula, owesifazane - njengenombolo boomerang, uma yena uthanda wena, yena Izobuya.
Asikho isidingo sokuba bagijimele
Akukho isimiso okunjalo Kissing, okuyinto wawubekela imithetho eqinile, okufanele sibe naso lapho okokuqala esebanga noma ocansini, kodwa musa ukusheshe yimuphi omunye noma abanye. Abanye abafana bakholelwa ukuthi ukungabi ngokwanga phezu usuku lokuqala - kukhombisa ukuthi isiphukuphuku futhi akafuni ukukubona manje. Ngenxa imicabango enjalo eziningi ezisheshayo ukuntshontsha ngokwanga ngasiphi intengo ngosuku lokuqala, ukuzizwa sengathi winner. Kodwa, kholwa kimi, kungcono ukunikeza isikhathi intombazane ukuphupha ngayo kungaba okokuqala. Kwanele kiss on the goodbye esihlathini okhela umcabango wakhe.
Indlela ukuqabula intombazane? Funda ukuthinta wakhe
Khumbula, uma engaphucwanga kuwe uma usondelene kakhulu, likhiphe amehlo akhe, uyobe bethuthumela, okuthakazelisayo kiss ngokushesha, futhi uzobona nini! Lokhu kungenziwa ngokuthi indawo uma wayevame uyakhothama ekhanda lakho, ebheka wena emomotheka, ngokuthinta izinwele zakhe nentamo. Uma intombazane ulinde kiss yakho, ukunyakaza kwakhe ukubambezela futhi babe bushelelezi, futhi konke lokhu ukuze akunike ithuba ukubamba izindebe zakhe. Thina kiss ngokuvamile bagcina usuku uyilo igama elithi "unya" ngoba quthu emaphusheni ami olunikezile kokubili, kodwa lokhu futhi wadala zandulela sivuselelane uthando.
Asikho isidingo indiva kwezahlakalo romantic kusukela movie, kungcono uzithatha inothi. Hhayi ngephutha ibhayisikobho ethile kukhulunywe ngaye ekuqaleni, ngoba eqinisweni amantombazane anisuthi amaphuzu okusezingeni eliphezulu wokuphila, futhi bamane babuke nje ukusuka kolunye uhlangothi kuya othile, ngisho nokuphila cinematic. Uma guys bayaqaphela ukuthi ngaphambi ukuqabula intombazane, udinga ukudala simo esifanele lokhu, kuyokuhambela ngokushesha endleleni. Dinner ebhishi noma kokuncoma kwelanga ngokuphelele ukuhanjwa lokhu, bese ubheka imininingwane amafilimu. Imboni ifilimu sidalwe hhayi kuphela ukujabulisa, kodwa futhi ukuze babonise ukuthi kungaba impilo yakho uma wena uzoyenza.
Mhlawumbe injabulo enkulu - kulapho konke kwenzeka ngesikhathi esifanele futhi endaweni efanele. Sithemba ukuthi amathiphu ethu ukwesaba ukuqabula intombazane ngaleyo ndlela ngempumelelo eseyiqedile kiss lokuqala futhi kubalulekile ukuba ubhalele une isihloko esisha esithi: ". Intombi yami uthanda angiqabule wami, ngidinga ukuphazamisa wakhe isikhathi esifushane bangabeki"
Ukuhlehlisa. Hyperactivity - isicupho procrastinators
Umqondo "ISIFISO": kuyini?
Uba kanjani indoda nokuba ibe isibonelo kwabanye
Virus Trafff lab.ru: indlela kokuyikhipha PC yakho?
I-Vorontsov Palace (St. Petersburg): amahora okuvula, incazelo, amaqiniso athakazelisayo
Kanjani ukwakha wezangaphakathi imbala? Buxhomeke ngoba esiqandisini esakhelwe
Salmon Pink e ukhilimu: Ungadliwa
Pension "Umoya ohelezayo Deluxe" Zatoka: isithombe, ukubuyekezwa
Ukudoba entwasahlobo. Lapho spring iqala ukuluma carp?